Galfata Warra Hidhaa Keessatti Nu Biraa Hafee Of Harkaa Qabna: Warra Ba’e Keessaa.
Guraandhalaa 09, 2018
Mana hidhaa Qilinxoo
Warrii mana hidhaa Itoophiyaatii bahe jara hidhaatti hafeef yaadda'a
Waggaa lama dura galmee Obbo Fraaol Daanieel jalatti himannaan shoroorkeessummaa irratti dhihaatee mana murtiitti deddebi’aa kan turan namoota saddeet keessaa manni murtii torban darbee afur bilisaan gadhisee jira. kanneen galmee kana irraa mana hidhaa keessatti hafan arfan ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan manni murtii ajaje .
Saddeettanuu himannaan ituu irratti hin dhiyaatin baatii saddeet Maakalaawwii keessatti dararamaa akka turan keessumaa himatamaan inni tokko kan kan galmee kana irra ture umriin isaa 60 ta’uus reebamaa ture jedhu.
Kanneen torban dabree ba’an keessaa tokko jireenyii Maakalaawwii fi mana hidhaa Qilinxoo keessa sukanneessaa ta’u dubbatan.
Kanneen nu biraa hidhaa keessatti hafan galfata nutti kennatan qabu.“Haala keessa jirru uummata keenyatti nu himaa” jechuun dhaammatan jedhan. Uummanni sagalee tokkoon akka baanuuf nuuf haa iyyu jechu isaanii ibsan.
Gama kaaniin mannii murtii fedeeraala Olaanaa Lidetaa dhaddachii 4ffaan kanneen galmee kana irraa hidhaa keessatti hafan arfan keessaa tokko himannaan isaanii gara yakka idileetti jijjiruun guyyaa har’a inni haga ammaatti hidhaman ni ga’a jechuun biliisaan baasuu isaa abukaatoonn ibsanii jiru.
Kanneen hafa sadeen immoo baatii dhufu ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan bellamamee jira.